Dr Mrs Mg – Medical Sharing
February 23, 2020 Dr Mrs Mg
ဒုက္ခ နှင့်​ ကြုံရ​တော့မဲ့ သခင်အတွက် အသက်ပေးသွားတာ …. ခွေးတွေ သစ္စာရှိပြီဆိုရင် လူတွေထက်သာတယ် ❤️ ခွေးတစ်ကောင်တောင် သူရဲ့ သခင်အပေါ်မှာ ကျေးဇူး သစ္စာရှိတယ်ဆိုတော့ ထမင်းစားပြီး အသိဥာဏ် ရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်အနေနှင့် ခွေးနှင့် နှိုင်းစရာမလိုအောင် Read more
ကံမကောင်းဘူးဆိုရင် ကံကောင်းအောင် ဘာလုပ်ရမှာလဲ ??? ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် ဒေါက်တာအရှင်နန္ဒမာလာဘိဝံသ လောကမှာ ကံမကောင်းဘူးဆိုရင် ကံကောင်းအောင်က ဘာလုပ်ရမှာလဲ၊ မကောင်းတဲ့ကံတွေ ပပျောက်အောင် ကံကောင်းတဲ့နည်းတွေ မရှိဘူးလားဆို၊ ရှိတယ်။ အကုသိုလ်အကျိုးတွေ ဝင်ရောက်ဖြစ်ပေါ်နေတာကို လူတွေက ကံမကောင်းဘူးလို့ပြောတာ။ အကုသိုလ်ရဲ့ အကျိုးတရားတွေက Read more
စက္ကန့် (၆၀) အတွင်း အိပ်ပျော်စေမယ့် အသက်ရှုလေ့ကျင့်ခန်း (လူတိုင်းအတွက် အသုံးတည့်လွန်းပါတယ်) စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် ညဖက်မှာ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်ဖို့ခက်နေလား။ ၄-၇-၈ ဆိုတဲ့ အသက်ရှုလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုကို မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းက ဦးနှောက်ကနေ တွေးနေတဲ့အတွေးတွေကို ရပ်တန့်ပြီး အိပ်မောကျစေဖို့ အကူအညီဖြစ်စေမှာပါ။ Read more
ကျောက်တည်ဝေဒနာရှင်များ သောက်ဖြစ်အောင် သောက်ကြည့်ပါ သောက်လို့မပျောက်ဘူးဆိုရင်လဲဒီနည်းလေးက ဘေးထွက်ဆိုးကျိူးမရှိသလိုငွေလည်းကုန်လှတာမဟုတ်ပါ ။ ၁၀၀မှာ၈၀လောက်သက်သာပျောက်ကင်းတာတွေ့ရပါတယ်။ 80%ပဲပျောက်တော့ ကျန်20%ကရော? ကျောက်တည်ခြင်းအကြောင်းလေးမျိုးထဲမှာ အရွယ်ရောက်ပြီးသူကျောက်တည်နေရင်ဒီနည်းကပျောက်နေလို့ပါ ကျောက်တည်ခြင်းအရွယ်ပမာဏ အရွယ်ရောက်ပြီး=80% အရွယ်မရောက်မှီ=20% ကျောက်တည်နေသူများအတွက်ဆေးနည်း ★★★ ဒန့်သလွန်အမြစ်ကိုပြုတ်ပြီးပူပူလေးသောက်ကြည့်ပါ ။ မနက်/နေ့လည်/ည တနေ့၃ကြိမ် (ပုံမှန်သောက်ရေခွက်ဖြင့်) ၁၀ ရက်သောက်ပါ ။ အမြစ်အရွယ် ၁လက်မလောက်လုံးပါတ် Read more
နိင်ငံအကျိုးပြု အရံမီးသတ်ရဲဘော် ဘဘ ဦးမော်စီ နိင်ငံအကျိုးပြု အရံမီးသတ်ရဲဘော် ဘဘ ဦးမော်စီ ငွေကျပ် 200,000Ks သွားရောက် ကန်တော့ခဲ့ပါတယ် . ဘဘ က အပြင်မှာ မျက်နှာလေးက ကြည်နေရော မြင်ရတာ တဂယ်ကို အေးချမ်းလွန်းတယ် Read more
၅_ပါးသီလဆိုတာဘာလဲ ??? (အရမ်းကောင်းလို့ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်)
၅_ပါးသီလဆိုတာဘာလဲ ??? (အရမ်းကောင်းလို့ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်) ဘာသာရေးမကြီးစိုးတဲ့ ဒိန်းမတ် နော်ဝေလို နိူင်ငံတွေမှာ သူခိုးမရှိဘူးတဲ့ ထောင်တွေဆိုလည်း ပြန်ပိတ်ရတာတွေ ရှိသတဲ့ နေထိုင်လို့အကောင်းဆုံးနိူင်ငံတွေထဲ နံပါတ် တစ်/နှစ် ချိတ်ကြတယ် အဲ့မှာနေတဲ့ အစ်ကိုတယောက်ပြောပြတာ အရမ်းကို ငြိမ်းချမ်းတယ်တဲ့ လူသူမရှိတဲ့ ကျေးလက် ကားလမ်းဘေးမှာ ရောင်းသူမဲ့ Read more
ဆေးဘက် ဝင်မှန်းသိတယ် အဲလောက် အကျိုးကျေးဇူးကြီးမှန်းမသိခဲ့တဲ့ ကြောင်လျှာပင်
ဆေးဘက် ဝင်မှန်းသိတယ် အဲလောက် အကျိုးကျေးဇူးကြီးမှန်းမသိခဲ့တဲ့ ကြောင်လျှာပင် အဆိပ်အမျိုးမျိုးနှင့် ရောဂါ (၁၈) ပါး ကို ပျောက်ကင်းနိုင်သော ကြောင်လျှာသီး ကြောင်လျှာရွက် ကြောင်လျှာပွင့် / ကြောင်လျှာပင် (Indian Trumpet Flower , Raw Material Read more